Fanafihana tany Ampanefy: jiolahy dimy tratra niaraka tamin’ny basy vita gasy | NewsMada
Fanafihana tany Ampanefy: jiolahy dimy tratra niaraka tamin’ny basy vita gasy
Jiolahy miisa dimy no voasambotry ny zandary ny 29, 30 ary 31 oktobra teo nandritra ny fikarohana natao. Tohin’ny fanafihana mitam-piadiana tany Ampanefy, Atsimondrano, niseho ny alin’ny 28 hifoha 29 oktobra lasa teo ity vokatra ity. Basy poleta vita tanana miisa telo no sarona tany amin’izy ireo sy ny findain’ireo olona voatafika.
Raha tsiahivina, nisy jiolahy nirongo basy miisa dimy lahy nanafika ny fokontany Isaingy, Ampanefy ka trano fivarotana miisa telo no nasesin’izy ireo norobaina, ny entana sy ny vola. Lehilahy iray tompon-trano kosa no lavon’ny bala teo amin’ny lohany. Niezaka niantso vonjy ireo olona, saingy noho ny tahotra, tsy nisy nahasahy nivoaka. Ny zandary tany Ankadivoribe, (5 km avy eo Ampanefy) no nirodorodo namonjy teny an-toerana. Mbola teo am-panaovana fisafoana amin’ny alina teny Ankadivoribe mihitsy izy ireo tamin’izany ka nahafaingana ny famaliana ny antso.
“Efa tsy tratra intsony teo an-toerana anefa ireto jiolahy ireto ka ny fikarohana sy ny fanarahan-dia ary ny fiaraha-miasa amin’ny fokonolona manodidina no nandrenesana fa any amin’ny fokontany Tsararirinina, 2 km avy eo Ampanefy, izy ireo no mbola manafika trano iray hafa indray”, hoy ny zandary. Namonjy io toerana io ireo zandary ka nahatsikaritra azy ireo teo am-pamakiana ny trano. Hitan’ireto jiolahy ny fahatongavan’ny zandary ka raikitra ny fifampitifirana.
Saika nifampitifitra tamin’ny polisy
Nisy fiara 4×4 iray nipoitra tampoka avy any aorian’ireo zandary nitaratra jirobe mazava no sady nitifitra azy ireo, saingy tsy nahavoa. Saika hamaly izany, indrindra, ireo zandary no nahatsikaritra fa fiarana polisy izy io ka ny Ben’ny Tanàna no niantso ireo polisy nilaza fa ny zandary no lasibatr’izy ireo ka tsy tokony hanohy intsony ny tifitra izy ireo. “Rehefa nifanantona ny roa tonta taorian’izany dia lasa niverina namonjy ny tobiny ireo polisy izay avy any amin’ny kaomisaria Tanjombato, izy ireo rahateo moa nanambara fa manao fisafoana no antony nandalovany tany”, hoy ny fanazavana.
Nisy jiolahy iray tamin’ireo nifanandrina tamin’izy ireo no tsy afa-nandositra intsony satria voatifitra teo amin’ny tongony. Tratra teny aminy ny basy vita tanana iray. Io no nanoro ny trano fonenan’ireo namany ka ny maraina be tamin’ny 5 ora, voasambotr’ireo zandary ireo indray teny Ankasina 67 ha ny roa lahy izay nahatratrarana basy miisa roa. Mbola nitohy ny fikarohana ka ny 30 oktobra, voasambotra teny amin’ny Fasan’ny Karàna ny jiolahy iray niara-nanafika tamin’izy ireo raha teny Soavina Atsimondrano kosa no sarona, ny 31 oktobra ny lehilahy iray, mpanome vaovao azy ireo mikasika ny trano tokony hotafihina eny amin’iny faritra iny. Atolotra ny fitsarana izy ireo.